कांग्रेसमा सहमतिको ‘रिले दौड’ spacekhabar
कांग्रेसमा सहमतिको ‘रिले दौड’ रिले दौड सहमतिमा टुंगिएला कि यस्तै ‘लिङ्गरिङ’ मै अघि बढला ?
रामजी दाहाल काठमाडौं, ३० मंसिर
गत १४ मंसिरमा सम्पन्न उप–निर्वाचनमा भक्तपुर र धरानमा हात पारेको परिणामबाट थोरै भए पनि कांग्रेसले राहतको महसुुस गरेको अवस्था थियो। त्यसैका बलमा चिया पसलका गफमा सत्तासीन दलका कार्यकर्तासँग चर्को स्वरमा कुरा गर्न पाउँदा कांग्रेसजनको मुहारमा खुसी छाएको थियो।
त्यो खुसी भने केन्द्रीय नेताहरूले लामो समय अड्न दिएनन्– आन्तरिक कलह छताछुुल्ल बनाएर। उपनिर्वाचनको समीक्षा, भ्रातृसंस्था र विभाग गठनलगायत विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक बहिष्कारबाट सिर्जित अवस्थाका कारण ती कांग्रेसजनलाई चिया पसलमा मुख देखाउन नहुुने बनाइदिए।
गत बिहीबारका लागि डाकिएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पार्टी मुख्यालय सानेपा गएर पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय नेताहरू बहिष्कार गरी बाहिरैबाट फर्किए। सारमा जे जस्ता माग भए पनि वास्तविक कुरो भने महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बैठकको एजेन्डा बनाउनुुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो। तर संस्थापन पक्ष भने समायोजको मुद्दा टुंगो लाग्ना साथ राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सैद्धान्तिक कुरा अघि सारेको थियो।
पौडेल पक्षको बहिष्कारका बीच बसेको बैठकले विभागको संख्या बढाउने निर्णय ग¥यो। त्यही निर्णयपछि रुष्ट बनेको पौडेल पक्षलाई फकाउन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि भोलिपल्ट (शनिबार) बिहानै पौडेलनिवास बोहोराटार पुुगे। बैठकमा पौडेलले पुरानै अडान दोहो¥याए। उनले संस्थापन तर्फबाट कार्यदलका संयोजक निधितिर संकेत गर्दै कार्यदलले नै सहमति खोज्नुपर्ने बताए।
शनिबार साँझपख पुनः कार्यदलका संयोजक निधिले पौडेल पक्षका कार्यदलका संयोजक प्रकाशमान सिंहसँग उनकै निवास चाक्सीबारीमा भेटेर पौने ३ घण्टा कुराकानी गरे। सिंहले सहमतिका लागि तयार भएको भन्दै थप छलफलमा जोड दिए।
भोलिपल्ट आइतबार बिहान उपसभापति निधि सहमतिका लागि भन्दै महामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिवास महाराजगन्ज पुगे। सहमतिका लागि तयार भएपछि कोइरालाले कार्यदल संयोजक प्रकाशमानलाई बोलाएर थप छलफल गरे।
संस्थापनइतरले बहिष्कार गरे पनि आइतबार बैठक भने बस्यो। तर बैठकले औपचारिकबाहेक अरु निर्णय गरेन। औपचारिक एजेन्डामा थप छलफल गर्ने भन्दै सोमबारका लागि बैठक पुनः बोलाइयो।
सोमबारको बैठक सुरु हुनुुअघि बिहानैदेखि उपसभापति निधि सहमतिका लागि भेटघाटमा व्यस्त छन्। यसैक्रममा, नेता प्रकाशमानको निवास चाक्सीबारीमा बसेको बैठकमा सभापतिका तर्फबाट निधि र पौडेलका तर्फबाट सिंहसहित दिलेन्द्र बडू र हृदयराम थानी सहभागी थिए।
बैठकमा नेविसंघ, तरुण दल, पार्टीका विभिन्न विभाग र महाधिवेशनको कार्यतालिकालगायत विषयमा सहमति गरी अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भयो। सहमतिका आधारमा अघि बढ्नेमा दुवै पक्षका नेताहरू सकारात्मक भए पनि ठोस सहमति नभएपछि पुनः आफ्नो टिममा छलफलका लागि चाक्सीबारीबाट निस्किएका थिए।
उपसभापति निधि सभापति देउवानिवास बूढानीलकण्ठ तथा सिंहलगायत नेताहरू वरिष्ठ नेता पौडेलनिवास बोहोराटार पुगेर थप छलफल गरे।
बूढानीलकण्ठ र बोहोराटारको छलफलपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि पुनः कार्यदलको बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा बोलाइएको छ। जुन बैठकमा दुवै पक्षका कार्यदलका संयोजकहरूले आ–आफ्नो टिममा भएको छलफलबारे कुरा गरी केन्द्रीय समितिको बैठकमा थप छलफल गर्नेमा कार्यदलका सदस्यहरू विश्वस्त छन्।
यसरी केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र विभिन्न विषयमा सहमति जुटाउनका लागि कांग्रेस नेताहरूबीचको म्याराथन हेर्नलायक देखिन्छ । कांग्रेसका नेताहरूबीच सहमतिका लागि रिले दौड भइरहेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । हेरौं यो रिले दौड सहमतिमा टुंगिएला कि यस्तै ‘लिङ्गरिङ’ मै अघि बढला ?
कांग्रेसमा सहमतिको प्रयास जारी, चाक्सीबारीमा पुनः देउवा र पौडेलपक्षबीच बैठक
चाक्सीबारी बैठकपछि उपसभापति निधि देउवानिवास बूढानीलकण्ठ, सिंह पुगे पौडेलनिवास बोहोराटार
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ३०, २०७६, ०१:५०:००
बसुन्धारामा पौडेल पक्षीय भेलाः क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड
तेस्रो लहरको जोखिम न्युनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्ध अन्तरक्रिया